Ny pejy fandokoana Kangaroos dia misintona sy miloko maimaim-poana
Kangaroos - boky fandokoana biby
Amin'ity pejy ity dia hahita pejy fandokoana isan-karazany amin'ny lohahevitry ny kangaroo ianao. Ny pejinay fandokoana dia nalaina araka izay azo atao mba hanomezana fahalalahana mamorona araka izay azo atao ny zazavavy sy ny zazalahy. Faly izahay hamorona sary antsipiriany amin'ny fangatahana.
Pejy misy fanononana amin'ny teny anglisy kangaroo
Ireo biby manokana ireo dia manaitra ny ankizy sy ny olon-dehibe amin'ny endrika mampiavaka azy manokana sy ny mampiavaka azy ireo izay notezaina tao anaty tohotra nandritra ny fotoana kelikely. Ny tsindry iray amin'ireto rohy manaraka ireto dia manokatra ny pejy tsirairay avy miaraka amin'ny maodely fandokoana:​
Teny fikarohana fanampiny: Kangaroo - kangaroo